नेपाल आईडल तेस्रो संस्करण घोषणा, बुटवलमा ३ असोजमा हुने हेर्नुस कहाँ कहिले ? – On Khabar
Banner News गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार मनोरन्जन समाचार
नेपाल आईडल तेस्रो संस्करण घोषणा, बुटवलमा ३ असोजमा हुने हेर्नुस कहाँ कहिले ?
September 17, 2019 onkhabarComment(0)
अनखबर / भाद्र ३१
काठमाडौं : नेपाली टेलिभिजन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो गायन रियालीटी सो ‘नेपाल आइडल’को तेश्रो संस्करण घोषणा भएको छ। एपी वान एचडीबाट प्रसारण हुँदै आएको ‘नेपाल आइडल’ को पहिलो र दोश्रो संस्करणको सफलतापछि तेश्रो संस्करणको तयारी भएको हो। यो सिजनका लागि देशका मुख्य ६ वटा सहरमा अडिसन हुँदैछ। मंगलबार पोखरादेखि सुरु हुने अडिसन कात्तिक ६ गते काडमाडौंबाट टुंगिने छ। बुटवलमा ३ असोज, नेपालगञ्जमा ६ असोज, वीरगन्जमा १० असोज र विर्तामोडमा १४ असोजमा अडिसन हुँदैछ। मंगलबार पोखराको सिमालचौरस्थित जनप्रिय माविमा अडिसन हुनेछ।
१६ देखि ३० वर्षको उमेर समूहका नेपाली नागरिकले अडिसनमा सहभागी हुन पाउनेछन्। अडिसनमा सहभागी हुन आउँदा दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र नेपाली नागरिकताको फोटोकपी पेस गर्नुपर्ने छ। अडिसन बिहान ८ बजेदेखि ४ बजेसम्म सञ्चालन हुने नेपाल आइडलका प्रोजेक्ट हेड तथा निर्देशक सुरेश पौडेलले जानकारी दिए।
फर्म भर्न र प्रतियोगितमा भाग लिन कुनै शुल्क लाग्ने छैन। नेपाल आइडल सिजन ३ को निर्णायकमा संगीतकार न्ह्यू बज्राचार्य, संगीतकार तथा गायक कालिप्रसाद बास्कोटा र गायिका इन्दिरा जोशी रहेका छन्। अमेरिकन आइडलको फ्रेन्चाइज लिएर एपीवान टिभीले ३ वर्षदेखि नेपाल आइडल गायन प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ।
नेपाली नागरिकता भएका १६ देखि ३० वर्षभित्रका नेपालीले प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने व्यवस्था आयोजकले संस्थाले गरेको छ। सांगीतिक एल्बमका लागि गीत रेकर्ड गरिसकेका व्यावसायिक गायक र गायिकाले समेत नेपाल आइडलमा भाग लिन सक्नेछन्।
नेपाल आइडलका प्रस्तोतामा आसिफ शाह फाइनल भए पनि उनका सहकर्मी तय हुन केही दिन लाग्ने कार्यक्रम निर्देशक एलन श्रेष्ठले बताए। मंसिरतिरबाट कार्यक्रम प्रशारणमा आउने उनको भनाइ छ। पहिलो नेपाल आइडलको विजेता पोखराका बुद्ध लामा भएका थिए भने दोस्रो नेपाल आइडल रवि ओड भएका थिए। बुद्ध पहिलो नेपाल आइडल बन्दा निशान भट्टराई र प्रताप दास दोश्रो र तेश्रो बन्न सफल भएका थिए। नेपाल आइडलमा प्रथम, दोश्रो र तेश्रो स्थान प्रप्त गर्न सफलले देश विदेशका विभिन्न मञ्चमा प्रस्तुति दिँदै ख्याति कमाएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘विप्लव’ स्याङ्जाका नेता कारागार चलान, धरौटीमा मागियो साढे ४ लाख
June 1, 2019 onkhabar
अनखबर/स्याङ्जा । जेठ १८ । राजद्रोह र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्यांग्जा जिल्ला सेक्रेटरी गोकुल पराजुलीलगायतका चार जना नेता जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी राख्न इन्कार गरेपछि कारागार चलान भएका छन् l जिल्ला कारागार शाखा स्याङ्गजा चलान गरिएका अन्य नेताहरुमा जिल्ला जनसरकार प्रमुख सागर अर्याल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ […]
अन्तर्राष्ट्रिय कराँतेमा सहभागी हुन नेपाली टोलि पटनामा, खेलाडी उत्साहित
April 22, 2019 April 22, 2019 onkhabar
निरा गौतम/ अनखबर बुटवल (हाल पटना भारत ) भारतको पटनामा सोमबारदेखि शुरु हुने अन्तराष्ट्रिय कराँतें तथा किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाल सहित बिभिन्न देशका खेलाडीहरु पटनामा जम्मा भएका छन् । च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान , बंगलादेश लगायतका देशका खेलाडीहरु पटना आइपुगेका हुन् । भारतको राजधानि पटना स्थित इन्डोर स्टेडियममा हुने च्याम्पियनसिपको […]
मर्चवारिमा विद्यालयमा झडप हुदा वडाअध्यक्षको टाउको फुट्यो
August 29, 2019 onkhabar
ईन्द्रजित राय /भदौ १२ मर्चवारी मर्चवारिको एक विद्यालयमा झडप हुदा एक वडाअध्यक्षको टाउकोमा चोट लागेको छ । स्थानीय मनराजी उ मा वि मा शिक्षक आभव हुदा विद्यार्थीले पटक पटक शिक्षक माग गरे पनि गाउँपालिकाले आलटाल गरेको भन्दै विद्यार्थी ले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन र नारावाजी गर्दै ढुंगामुढा हुँदा मर्चवारीको दुइटै कार्यालयका झ्यालका सिसाहरु फुटेका छन् […]
सिद्दबाबामा पहिरो झर्दा २ गाडी पुरियो, १ को मृत्यु ४ घाईते
नवलपरासिको दाउन्नेमा यात्रुबाहक बसमा आगजनी
विप्लव पुत्र प्रकाशसहित १५ जना चितवनबाट गिरफ्तार
साइबर क्राइम मुद्दामा पत्रकार चन्द र गुरुङले पाए सफाई
जनपत्रकारका केन्द्रीय सदस्य हमाल, दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा
पेट्रोलियम पाईपलाईनको उद्घाटन ओलिले नेपालबाट, मोदिले दिल्लिबाट
पत्रकार ओम हमाललाई ७ दिनको म्याद थप, हमालको पक्षमा देशभर पत्रकार एकजुट
ओम हमालको पुनः गिरफ्तार, जनपत्रकारमाथी सरकारको योजनाबद्ध हस्तक्षेप : डुम्रे
जनगर्जन मिडिया प्रा.ली. द्धारा सञ्चालित अनखबर डट कम
Kathmandu , Nepal Email: info@onkhabar.com onkhabaronline@gmail.com Web: www.onkhabar.com
2018 Ramechhapkhabar | Editorial by MysteryThemes.